Dubartii Oromoo kaampii baqattootaatti dhalattee – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDubartii Oromoo kaampii baqattootaatti dhalattee
Dubartii Oromoo kaampii baqattootaatti dhalattee
Isheen Eenyu 23: Dubartii Oromoo kaampii baqattootaatti dhalattee, dhaabbat gargaarsaa hundeessite
(BBC Afaan Oromoo) — Maqaan kiyya Meeymunaa Huseen jedhama. Sababa tasgabbii dhabuu biyyaan, maatiin kiyya Mooyaleerraa baqatanii Soomaaliyaa jiraachuu jalqaban. Kanarraa kan ka’e anis kaampii baqattootaa Soomaaliyaa keessatti dhaladhee.
Gargaarsa dhaabbata ‘International Rescue Committee’ jedhamuun jireenya keenya Ameerikaa magaalaa Saan Diyaagotti jalqabne. Boodarra gara Kaalifoorniyaa deemne; anis achitti guddadhe.
Barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achitti baradhe. Barnoota digirii jalqabaa Saayinsii Hawaasaatiin Yuunivarsiitii Kaaliforniyaarraa; digirii lammaffaa kiyya immoo Maanajimeentii (Organizational Management) Yuunivarsiitii Antii’och’tti baradhe.
Anis maatii kiyya keessaa dubartii jalqabaa barnoota sadarkaa lammaffaa xumurtee fi nama jalqabaa digirii lammaffaa baratte ta’e.
‘Tiyyaa’ haadha tiyya waliin dhaabne
Eega barnoota kiyya xumure booda haadha kiyya waliin ta’uun Faawundeeshinii ‘Tiyyaa’ jedhamu hundeessine. Dhaabbanni kunis baqattoota gargaaruurratti xiyyeeffatee kan hojjatudha.
Fawundeeshinii kanaanis baqattoonni dhala namaa akka ta’anii fi jaalatamuu akka danda’a itti agarsiisuurraa jalqabne.
Haati tiyya bara 2012 soorama waan baateef hojii isheen jalqabde hoggantuu dhaabbatichaa ta’uudhaan itti fufee hojjachuun jalqabe.
Namoota tola ooltummaadhaan hojii kana gargaaruu barbaadan filannee maatii tokko nama dhimmoota adda addaarratti isaan gargaaru goona.
Namoonni tola ooltummaan nutti makaman kunneen maatii ramadaman saniifi hojii barbaaduu, ollaasaanii waliin wal barsiisuu, geejjiba hawaasaa akka fayyadaman gargaaruu, Afaan Ingiliizii akka afaan lammaffatti baratan taasisuu fa’a irratti hojjataa turre.
Haaluma kanaan fedhiisaaniirratti hundaa’uun ogummaa nyaata bilcheessuurratti akka hirmaatan goone.
Bara 2016-17’tti siyaasa Ameerikaa keessatti seera immigireeshinii fi baqattootarratti jijjiiramni dhufe.
‘Mul’anni koo taphattuu piroofeeshinaala tahuu dha’
Hojii listiroorraa hanga konkolaachistuu otobisiitti
Shamarree wajjira ‘Microsoft’ Afrikaa Bahaa hoggantu
Kanarraa kan ka’e anis intarpiraayizii hawaasummaa namoota muraasa hirmaachisu jalqabuu qaba jedhee murteesse.
Hojii intarpiraayizii kana keessattis baqattootaa fi maatii baqattootaa waliin ta’uun gara hojiitti seenne.
Bara 2018-19 mana nyaataa mataa keenyaa ‘Flavors from Afar’ jedhamu Loos Anjalees (LA) keessatti banne.
Hojii kanaafis namoota asiin dura baqattoota ta’anii guutuu addunyaarraa dhufan nyaata biyyasaanii akka beeksisaniif carraa kennineefi.
Amma sababa weerara koronaavaayiras kanaaf hojiilee hojjannu kanneen yeroodhaaf adda kunneera.
Ta’us garuu teeknoolojii akka ‘FaceTime’ fi ‘WhatsApp’ fayyadamuudhaan ijoollee hojii manaa fi qo’annaasaanii gargaaraa jirra.
Badhaasa Faawundeeshiniin ‘Tiyyaa’ argate
Faawundeeshiniin keenya namootaa fi dhaabbilee adda addaarraa beekamtii fi badhaasa hedduu argateera.
Namoota akka Alii Birraa fi ogeessa seeraa fi miseensa paartii Dimookiraatii Ameerikaa kan ta’an Aadam Sheef irraa beekamtii arganneerra.
Ani kophaa kiyyaan obbo Aadam Sheef irraa dubartii bara kanaa ta’uun beekamtii argadheera.
Waajjira kantiibaa Loos Anjalees irraas hojiilee nuti hawaasa keessatti hojjanneef dhaabbanni keenya badhaasa argateera.
Rakkoon guddaan nu mudataa ture namoota biroof baqattoonni eenyu, maaltu isaan barbaachisaa, maaf gara Ameerikaa dhufan jedhu fi dhimmoota baqattummaa waliin wal qabatan irratti hubannoo uumuu ture.
Yeroo murtaa’e booda namoonni waa’ee baqattootaarra hubannaa gahaa argatanii turan.
Addunyaarratti yeroo garagaratti rakkinni heddutu mudataa ture. Rakkoolee san keessatti xiyyeeffannaa kee jijjiiru malta nuti garuu hamma dandeenyeen kaayyoo keenyarratti cichinee hojjachuu barbaanna.
Dhimmoota siyaasaa fi rakkoolee yeroo sanitti mudatan irraa fagaannee carraa maatiin kunneen rakkoo mudate san boodaa, hojii uumuu fi jireenyasaaniirratti xiyyeeffannee hojjachuu barbaanna.
Hojii amma itti jiru kana baay’ee jaaladheeti kan hojjadhu. Sababni isaas yeroo kanatti namoonni waan Faawundeeshiniin Tiyyaa hojjatu beekaa jiru.
Dhaabbata keenya kanaan namoota hedduu hamma dandeenyeen waan gargaarruuf baay’ee gammadeeti kan hojii kiyya hojjadhu.
‘Herreega waliin akka tasaa wal jaalanne’
‘Qorannoo kootiin dura-buutummaa dubartootaa ifatti baasuun fedha’
‘Shamarran gonkumaa nama isaan gudeedetti heerumuu hin qaban’
Kaayyoon kiyya fuulduraa ‘Flavors from Afar’ akka milkaa’uuf hojjachuudha. Hojiilee amma jalqabne kana kutaalee Ameerikaa adda addaa keessatti babal’isuudha.
Hojii baqattummaarratti hojjannu kanas irra caalatti xiyyeeffadhee hawaasa keenyaaf baqattootni akka of danda’anii hojii mataasaanii uummatan gochuu fa’arratti itti fufee hojjachuu barbaada.
Dubartii Afriikaa taatee daldalarratti hirmaachuu yoo barbaaddu gargaarsa gaafachuuf ni qaanofta.
Dubartoota gama daldalaatiin milkaa’an hedduu yoo ilaaltu gargaarsaa fi maallaqa gaafachuurratti ciccimoodha.
Akkuma bilisummaadhaan gargaarsa gaafatuun carraan milkaa’uu kees guddaadha.
Ani bakka kana kan gahe kophaa kiyya miti. Onnee guutuun gargaarsaa fi maallaqa waan gaafadheef har’a as gahe.
Bakka gahu barbaannuuf sodaa tokko malee gargaarsaa fi maallaqa barbaannuu yoo gaafanne bakka gahuu barbannu san irraa wanti duubatti nu deebisu hin jiru.
BBC Afaan Oromoo; VOA Afaan Oromoo, Hagayya 16, 2018
BBC Afaan Oromoo: ‘Haadha warraa kootu sirba Afaan Oromoo na barsiise’
BBC Afaan Oromoo: ‘Haadha warraa kootu sirba Afaan Oromoo na barsiise’ Good job Ayyaantuu!!
QEEYROO OROMOO 1979
QEEYROO OROMOO 1979 Abbaa Urjii irraa Kalees boorumaa arraas boorumaa Qeeyroon Oromoo didde gabrummaa Tokkummaan…
Itoophiyaa fi Oromiyaa (Oromummaa vs Habashumma)
Seife Nebelbal Radio Interview with Jaal Jireenyaa Rabbumaa